धर्मगुरु रामरहिम बलात्कारी ठहर, दंगामा कम्तीमा २५ को मृत्यु - Samachar Pati : A Complete News Portal From PokharaSamachar Pati : A Complete News Portal From Pokhara
धर्मगुरु रामरहिम बलात्कारी ठहर, दंगामा कम्तीमा २५ को मृत्यु
प्रकाशित मिति: 2074 भाद्र 10 शनिबार(August 26, 2017) 11:33 AM बजे Posted By: samacharpati
चण्डीगढ (भारत)- धर्मगुरु रामरहिम सिंहलाई आफ्ना दुई अनुयायीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि चण्डीगढ नजिकै पाँचकुला सहरमा भएको दंगामा कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ।
अदालतले शुक्रबार उनलाई दोषी ठहर गरेलगत्तै भारतीय सेनालाई पाँचकुला सहरमा परिचालन गरिएको थियो। ‘डेरा सच सौदा’ सम्प्रदायका नेता रामरहिमलाई प्रहरीले हिरासतमा लिइसकेको छ। उनलाई हेलिकोप्टरमा राखी हरियाणा राज्यको जेलमा पठाइसकिएको छ।
हिन्दूस्तान अखबारका अनुसार फैसलापछि भएको दंगामा कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मुद्दा फैसला हुनुअघि पाँचकुलामा रामरहिमका दुई लाखभन्दा बढी समर्थक भेला भएपछि हरियाणा र पन्जाब राज्यका केही भागमा विद्युत् आपूर्ति, मोबाइल इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन बन्द गरिएको थियो।
पन्जाबमा तीन ठूला सहरमा हिंसाका सयौं घटना भएपछि कर्फ्यु लगाइएको थियो। न्यु देल्ही टेलिभिजन, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डिया टुडे, न्युज १८ का सञ्चारकर्मी घाइते भएका छन्। प्रहरीले दंगा नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास र पानीको फोहरा हानेको थियो। पाँचकुला, सिर्सा र पञ्जाबका केही हिस्सामा थप बल प्रयोग भएको छ। भारतीय राजधानी दिल्लीका केही स्थानमा समेत आगजनी भएपछि उच्चसुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ।
शक्तिशाली धर्मगुरु रामरहिमको हरियाणामा एक हजार एकड क्षेत्रफलमा मुख्यालय, होटल, सिनेमा, क्रिकेट र स्कुल छन्। दाबी अनुसार संसारभर ६ करोड मानिस रामरहिमका अनुयायी छन्।
सुरुमा उनले आफूमाथि लागेको बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरेका थिए। यो घटना कुनै अज्ञात स्रोतले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सन् २००२ मा पत्र लेखेपछि सार्वजनिक भएको थियो। ‘डेरा सच सौदा’ माथि अनुसन्धान गरिरहेका पत्रकारको त्यसै वर्ष हत्या भएपछि उनको आश्रममाथि छानबिन सुरु भएको थियो।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार गोप्यपत्र सार्वजनिक हुनुमा ती पत्रकारको संलग्नता रहेको शंका गर्दै रामरहिमले हत्या गरेको आरोप भारतीय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले लगाएको थियो। उनीविरुद्ध पत्रकार हत्याको मुद्दासमेत चल्दै आएको छ। तर उनले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
भारतमा धर्मगुरुहरूले अनुयायीको पारलौकिक मात्र होइन सांसारिक विषयमा पनि प्रभाव पार्दै आएका छन्। तर, थोरैको मात्र यस्तो प्रभाव पर्छ।
धर्मगुरु रामरहिमाथि आफ्ना चार सय अनुयायीलाई ‘भगवानको नजिक पुग्न’ भनी नपुंसक तुल्याएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। उनले टाइम्स अफ इन्डियासँग ‘सत प्रतिशत गलत, आफूले कहिल्यै कसैलाई यसो नगरेको’ बताएका थिए।
‘रकस्टार बाबा’ को नामले समेत चिनिने रामरहिम चम्किला र रंगीन लुगा लगाएर आधा दर्जन म्युजिक भिडियोमा समेत खेलेका छन्। अत्यन्तै महँगा गहना लगाएर कार्यक्रम आयोजना गर्ने हुनाले उनलाई ‘गुरु अफ ब्लिङ’ को नामले समेत चिनिन्छ।
शुक्रबार उनीविरुद्ध अदालतले आदेश सुनाउनासाथ पन्जाब र हरियाणामा रोइरहेका र आत्मदाह गर्ने धम्की दिनेहरू देखिएका थिए। २३ वर्षको उमेरमा रामरहिमले यो सम्प्रदायको ‘गैर नाफामुलक सामाजिक कल्याण र आध्यात्मिक संस्था’ को रुपमा जिम्मेवारी लिएका थिए। उनको संस्थाका भारत र संसारभरि ४६ वटा शाखा छन्।
विगतमा उनले धार्मिक व्यक्तित्वको अपमान गरेको आरोपसमेत लागेको थियो। सन् २००७ मा सिख सुमदायका पुजनीय व्यक्तित्व गुरु गोविन्द सिंहजस्तै पोसाक लगाएर विज्ञापनमा देखिएपछि यो समुदाय रिसाएको थियो। त्यस्तै, सन् २०१५ मा उनले आफूलाई एउटा भिडियोमा भगवान विष्णुको स्वरुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसबाट धार्मिक भावनामा चोट पुगेको भनी उनको आलोचना भएको थियो।
विगतमा उनले आफूलाई सफाइ अभियान र रक्तदान क्याम्पको आयोजना गरेर सामाजिक सुधारमा समेत प्रस्तुत गरेका थिए। सन् २०१० मा उनले आयोजना गरेको सामूहिक विवाह कार्यक्रममा यिनका एक हजार अनुयायीले सेक्स वर्करसँग विवाहसमेत गरेका थिए।
उनले आफ्नो विशाल छवि देखाउन हालैका वर्षमा केही सिनेमामा समेत खेलेका थिए। विभिन्न भाषामा बनाइएका उनका तीनवटा फिल्मले विवाद पनि ल्याएको थियो। जसमा उनले आफूलाई भूतप्रेत आदिसँग लडेको देखाउँदै ‘भगवानको सन्देशवाहक’ का रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
विभिन्न समयमा उनको सम्प्रदायले सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र विपक्षी कंग्रेसलाई समर्थन गरेको थियो। साभार : नागरिक
डिर्भोस दिए बसेकी मेगनलाई बेलायतका राजकुमार ह्यारीले
न्यूयोर्क ज्याक सनहाईट्समा “सरगम नेपाल” नामक संगीत
राम्रो काम गरेर फर्किएका तीनहजार नेपालीलाई पुनः
नेकपाको हेडक्वाटर टुंगो लगाउने जिम्मा ओली र प्रचण्डलाई
सौगात र नम्रताको ‘माछा माछा’
नेकपा : भोजवादी कि जनवादी ?
महिला भलिबल प्रतियोगिता ! (भिडियो )
#37149 (loading title)
मन्त्रीको टेलिफोन सम्पर्क नभएपछि…
#36640 (loading title)